🥇 ▷ Apple Card ayaa hada loo heli karaa dhamaan isticmaaleyaasha iPhone-ka ee Mareykanka. UU. ✅
Apple Card ayaa hada loo heli karaa dhamaan isticmaaleyaasha iPhone-ka ee Mareykanka. UU.
Waxaa la soo bandhigay bishii Maarso, Apple Card wuxuu bilaabay in la hirgaliyo maalmo ka hor markii tiro ka mid ah dadka isticmaala iPhone ee Mareykanka ay awood u yeesheen in ay iska diiwaangeliyaan kaarka deynta Apple-Goldman Sachs oo ay ku soo rogaan amarrada nooca jir ahaaneed. Goldman Sachs wuxuu wax ka qabtaa dhammaan arrimaha bangiga ganacsiga, laakiin kaarka waxaa loo heli karaa si dhakhso leh loogu isticmaalo codsiga Wallet, iyadoo Apple ay iska cadahay inay mas’uul ka tahay dhammaan howlaha kaararka smart. Haddii aad rabto inaad tijaabiso sixirkaas oo dhan ee Apple Card, waxaan kuu haynaa war weyn adiga: Kaarka Apple hadda wuxuu diyaar u yahay dhammaan adeegsadayaasha iPhone-ka Mareykanka. UU. Halkan Ka Dhageyso.
Apple waxay wax walba si rasmi ah u sameeyeen Talaadadii: Apple Card waxay hadda u bilaabatay dhammaan macaamiisha Mareykanka. Laakiin waa inaad lahaato iPhone si aad u isticmaasho kaarka. Apple Card wuxuu ku noolyahay codsiga Wallet, kaas oo sidoo kale ah meesha aad ku dari karto kaararka kale ee ku saabsan waxqabadka Apple Pay, iyo sidoo kale tigidhada iyo kaararka daacadnimada.
Iyada oo aan lahayn iPhone, ma iska qori kartid Kaarka Apple, markaa ha filan inaad firfircoonaato mid adiga oo adeegsanaya Android ama nidaamyada kale ee hawlgalka ah. Waxaad ubaahantahay iPhone oo ordaya macruufka 12.4 si aad uhesho kaarka, kaas oo ka dhigaya iPhone 6 kan iPhone ka ugu da’da weyn ee taageeri kara. Si aad u bilowdo hawsha, gal bogga Wallet oo guji calaamadda “+”.
Nidaamka codsashada oo dhan waa sahlan yahay, waana inaad ku heshaa nooca casriga ah ee kaarka gudahiisa ee Wallet gudaheeda daqiiqado gudahood, haddii la soo oggolaado in dalabkaaga la oggolaado. Ka dib waxaad bilaabi kartaa isticmaalka kaarka isla markiiba meel kasta oo laga aqbalo Apple Pay.
Isha muuqaalka: Isha AppleImage: Apple Inc.
Waxa kale oo aad dalban kartaa hal kaar oo Soojiidasho leh oo ah ‘Pennsylvania Apple Card’ waxaana lala xiriirin doonaa kaarkaaga Apple Digital. Sida kaararka deynta badan oo kale, Apple Card wuxuu la imaadaa barnaamij dib u celin lacageed. Lacagta ugu badan ee Apple waxaad heli kartaa waa 3%, taasina waxay ku jirtaa dhammaan iibsiyadaha si toos ah loogu sameeyo Apple, oo ay ku jiraan Apple Stores, apple.com iyo dukaamada dijitaalka ah. Intaa waxaa sii dheer, barnaamijka 3% abaalmarinta lacagta maalinlaha ah wuxuu sidoo kale quseeyaa ganacsatada la xushay, oo ay ku jiraan Uber iyo Uber Eats.
Intaas wixii ka dambeeya, waxaad ku heli doontaa 2% lacag celin ah macaamil kasta oo Apple Pay ah oo ah Kaarka Apple Ugu dambeyntiina, iibsiyada lagu sameeyay kaarka titanium ee Apple Waxay ku siinayaan 1% lacag caddaan ah maalin kasta.
Milkiileyaasha caalamiga ah ee iPhone ee doonaya inay iska diiwaangeliyaan Apple Card ma laha wax kale oo aan ka ahayn inay sugaan illaa Apple iyo Goldman Sachs ay diyaar u yihiin inay ku ballaariyaan adeegga dalal kale.
Isha isha: Apple Inc.